स्वास्थ्य/जीवनशैली Archives - Page3of6- कृषि पत्रिका
किन खाने पाकेको फर्सी ?
शुक्रबार १८ फागुन, २०७४
फर्सी हामीले प्राय हाम्रो तरकारीका लागी प्रयोग गर्ने चिनिएको तरकारी हो । अमेरिकामा उत्पादन सुरू भएको मानिएको फर्सी हाम्रो खानामा केहि दिन बिराएर तरकारीका रूपमा आइपुग्ने गर्छ । स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पनि निकै फाइदाकारी छ फर्सी । भिटामिनको मात्रा निकै बढी पाइने फर्सीमा अन्य पौष्टीक पदार्थ पनि उत्तिकै पाइन्छ । पहेलो भएर पाकेको फर्सी झन् फाइदा […]
आइतबार १३ फागुन, २०७४
एजेन्सी । अहिले नेपाली समाजमा पनि ग्रीन टी पिउने प्रचलन व्यापक बन्दैछ । खासगरी स्वास्थ्यप्रति सचेत बर्गले आफ्नो जिब्रोलाई ग्रीन टीमा अभ्यस्त गराउँदैछन् । दुध, चिनी र कमसल गुणस्तरको चियामा बानी परेका हामीलाई ग्रीन टीमा रस भिज्न अलि समय लाग्छ । धेरैजसो बलिउड सेलिब्रेँ नियमित रुपमा ग्रीन टी पिउने गरेका छन्, तन्दुरुस्ती र सौन्दर्यका लागि […]
यार्सागुम्बा अर्थात जडीबुटीको राजा
यार्सागुम्बा भनेको हिमाली भेकमा पाइने ढुसी र झुसिल्किरा एकै ठाउँमा जोडिएर रहेको बस्तु हो । यसमा ढुसी र झुसिल्किरा परस्परमा आश्रति भएका हुन्छन् । यार्सागुम्बाको जीवनचक्रका सम्बन्धमा बनस्पतिविदहरूका अनुसार यो ६ महिना किरा र ६ महिना बनस्पति भएर रहन्छ । त्यसरी हेर्दा बनस्पति जिवित रहे प्राणी मर्ने र प्राणी जिवित रहे बनस्पति मर्ने हुन्छ । […]
अर्गानिक खाना अर्थात कागुनो !
विश्‍वका प्राचीनतम अन्नबालीहरूमध्ये कागुनो (Foxtail millet: Setaria italica (L.) Beauv) पनि एक हो। नेपालको पहाडी क्षेत्रमा खेती गरिने यो बाली कोदोबालीअन्तर्गत पर्दछ। फ्याउराका पुच्छरजस्ता बाला हुने भएकोले अङ्ग्रेजीमा यसलाई फक्स्टेल मिलेट (Foxtail millet) भनिन्छ। नेपालका रामेछाप, गोरखा, लमजुङ, डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, कालिकोट, बाजुरा र बझाङ जि ल्लाहरूका असिञ्‍चित, कमसल, सीमान्त वा रूखो जग्गामा यसको […]
गहुँको जमराको जुसः मानव जीवनका लागि अमृत बुटी
शुक्रबार ०४ फागुन, २०७४
काठमाडौ। अध्ययनले गहुँको जुसमा अत्याधिक औषधीय तत्व हुने गरेको पत्ता लागेको छ । यसलाई सजिलै बनाउन सकिन्छ, धेरै खर्च पनि लाग्दैन, बनाउन समय पनि लाग्दैन । यद्यपी त्यसबाट स्वास्थ्यमा भने चमत्कारिक लाभ मिल्छ । यो हो, गहुँ को जमराको जुस । हामीले दशैंमा जसरी जमारा उमार्छौ, ठिक उसैगरी गहुँ को जमरा उमार्न सकिन्छ । यसलाई […]
लसुनको प्रयोग स्वास्थ्यको लागि फाईदा कि बेफाईदा ?
मङ्गलबार ०१ फागुन, २०७४
लसुन एक महत्वपूर्ण घरेलु औषधि हो । त्यसैले यसलाई घरायसी रुपमा प्रयोग समेत गर्ने गरिएको छ । प्राचिन समयदेखि नै विभिन्न भोजन र तरकारीमा मसलाको रुपमा लसुनको प्रयोग भएको पाइन्छ । लसुनले शरिरभित्र पैदा हुने अनेकौं रोगहरुको नाश गर्दछ । लसुनले पाचन शक्तिलाई बढाउँछ । हृदय र कलेजोलाई उत्तेजक पार्न महिलाहरुको महिनावारी ठीक राख्न र […]
शनिबार २९ पुष, २०७४
सकेसम्म धेरै फलफूल र सागसब्जी खानु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक भएकोमा कुनै शंका छैन । तर हामीले खाने यस्ता फलफूल र तरकारीको बोक्रा छोडाएर खानु कति फाइदाजनक छ विचार गर्नु पनि आवश्यक भएको पोषणविद् बताउँछन्। कीटनाशक औषधिको कुप्रभावबाट जोखिन वा देखासिकी वा बानीका कारण अधिकांशले बोक्रा हुने सबै फलफूल र सागसब्जीको बोक्रा छोडाएर खाने गर्छन् । […]
बुधबार ०६ मङि्सर, २०७४
पाइल्स एउटा यस्तो रोग हो, जसमा शरीरका विशेष हिस्सामा हरेक समय पीडा र जलन महशुस हुने गर्दछ । पाइल्सका रोगीका साथ सबैभन्दा ठुलो समस्या यस विषयमा डाक्टरलाई बताउनु हो । तर, यो गलत हो । डाक्टरसँग सल्लाह लिएर यसको उपचार गर्नु आवश्यक छ। औषधिका साथसाथ घरेलु उपायबाट पनि केही दिनमा तपाई यो समस्याबाट मुक्ति पाउन […]
ब्लड प्रेशर हटाउने मिठो फल
बुधबार ०४ साउन, २०७४
काठमाडौं । ब्लड प्रेशर आधुनिक जीवनशैलीको बीमारीका रुपमा लिइन्छ । यसलाई ‘साइलेन्ट किलर’ भन्ने गरिन्छ । मुटुको धमनीहरूमा प्रेशर बढ्ने बेला अर्गन सप्लाई गर्नका लागि ज्यादा प्रेशर लगाउनु पर्छ । यसलाई नै हाई ब्लड प्रेशर भन्ने गरिन्छ । टाउको दुख्नु, चक्कर आउनु र धड्कन बढ्ने जस्ता यसका प्रमुख लक्षण हुन् । हाई ब्लड प्रेशर एक […]
सुगर रोग पूर्ण रुपमा निको पार्ने फल
मङ्गलबार ०६ असार, २०७४
पछिल्ला दिनमा मानिसको व्यस्त जीवनशैली र अस्वस्थ्य खानपानका कारण मानिसमा विभिन्न खालका रोगहरु लाग्ने गरेका छन् । यस्ता रोगहरु बढ्नुमा मानिसको विलाशी जीवनशैली व्यायामको कमी आदीका कारणले मानिसमा रोग बढीरहेको छ । जसका कारण मधुमेह, हर्ट अट्याक, किड्नी सम्बन्धी रोगीको संख्या पछिल्ला दिनमा बढीरहेको छ । रागेलागेपछि विभिन्न औषधिहरुको प्रयोग गरिन्छ । तर, यस्ता रोग […]